Fanononana 20 momba ny manirery izay hahatonga anao hahatsiaro ho irery irery - Quotes
Ny fanirery dia zavatra izay iainantsika rehetra amin'ny fiainantsika mihoatra ny hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny fahatsapana ho manirery dia hita ho fanandramana ratsy. Betsaka ny fanaintainana amin'ny fahatsapana fa tapaka amin'ny tontolo manodidina anao.
Na dia tsy maniry ny hamaivanina aza ity fanaintainana ity, ity lahatsoratra ity dia hikatsaka ny hidera ny sasany amin'ireo hatsaran-toetra manirery.
Saina hendry maro no nahatakatra ny hery sy ny hatsarana ho hita amin'ny maha irery azy irery tanteraka.
Ireto misy teny nalaina 20 momba ny manirery izay mety hahatonga anao hanakaiky kokoa ny fihavanana aminao.
ny fomba fanehoana fihetseham-po amin'ny teny
Tokony ho lasa irery tanteraka isika, tena irery tokoa, ka miala amin'ny toetra lalina indrindra ananantsika. Fomba fijaliana mangidy izany. Fa avy eo resy ny fitokananay, tsy irery irery isika, satria hitantsika fa ny tena toetrantsika anaty dia ny fanahy, Andriamanitra izany, tsy azo zahana. Ary tampoka teo dia nahita ny tenantsika teo afovoan'izao tontolo izao isika, kanefa tsy voakorontana noho ny hamaroany, ho an'ny fanahintsika lalina indrindra dia fantatsika fa iray miaraka amin'ny zava-drehetra isika. - Hermann Hesse
Ity fitanisana lalina ity dia milaza amintsika fa ny fitokantokantsika sy ny fijaliana aterak'izany dia mety ho vavahady ahafahantsika mahafantatra ny fahamarinana lalina indrindra rehetra: mifandray amin'ny olon-drehetra sy amin'ny zavatra hafa rehetra isika. Iray daholo isika rehetra.
Ny fahatsiarovan-tena no zava-dehibe indrindra sy tsy azo ihodivirana ho an'ny olona rehetra. - Thomas Wolfe
Araka ny voalaza tao amin'ny fampidiran-dresaka nataonay, ny fahirano manohina ny olona amin'ny fotoana iray amin'ny fiainany. Fanandramana eran'izao tontolo izao. Ny fahafantarana fa mizara ny fijalianao amin'ny olon-kafa rehetra ianao dia afaka mitondra fampiononana sy fanampiana hanamora izany fijaliana izany.
Satria, raha irery irery, dia tsy afaka mino izany fa mety hisy ny hafa. Ny fanirery dia hita tanteraka. - Marilynne Robinson
ny fantaro ny tenanao , marina sy lalina, tsy maintsy miaina manirery ianao. Aorian'izay, rehefa afaka amin'ny eritreritry ny hafa, ny andrasana ary ny finoany ianao, dia azonao atao ny mamela ny tenanao ho TENA tanteraka sy tanteraka.
Hofenoiko ny tany efitra sy ny lanitra aho. Vato sy kintana aho, tsy miovaova, mahery sy tsy manana ahiahy. Feno ny tany efitra dia vonjina sy irery izy, fa tonga lafatra amin'ny toerana mangina. Ho efitra aho. - Kiersten White
Raha vantany vao hitanao hoe iza ianao, dia ho fantatrao fa ianao irery dia tanteraka. Tsy mila olona ivelany ianao hamenoana sombin-javatra tsy hita, satria tsy misy sombintsombiny very ianao.
Ny lehilahy dia afaka ny ho irery raha mbola irery izy ary raha tsy tia mitokana izy dia tsy ho tia fahalalahana satria rehefa irery irery vao tena afaka. - Arthur Schopenhauer
Azonao atao mahatsiaro voafandrika amin'ny fanirery, fa raha mahita fampiononana amin'ny fitokanana ianao dia hahatsapa ho afaka. Ny tenanao irery dia tsy voafehin'ny manodidina anao ianao. Azonao atao sy atao izay tianao. Mifalia amin'ity fahalalahana ity.
Meteza ho manirery. Manome fotoana anao hanontany tena ianao, hikaroka ny marina. Manana fahalianana masina. Ataovy mendrika hiainana ny fiainanao. - Albert Einstein
Aza atao ambanin-javatra ny tombony azo amin'ny maha irery . Manana fahalalahana bebe kokoa ianao hipetraka sy hieritreritra ary ho gaga amin'ny tontolo manodidina anao. Azonao atao ny misaintsaina ny fiainana, misaintsaina ny dikany, ary mahita ireo fahamarinana izay mety ho takona afenina.
Ny fanirery dia tsy tsy fahampian'ny fiaraha-miasa, ny fanirery tsy fananana tanjona. - Guillermo Maldonado
Tsy vahaolana amin'ny fanirery ny olona. Afaka mahatsapa ho irery ianao eo amin'ny vahoaka na amin'ny fanambadiana toy ny tsapanao mitokana. Mba handresena ny fanaintainana amin'ny maha irery anao dia tsy maintsy atao izany fantaro izay tianao hatao amin'ny fiainanao ny tanjonao, ny faniriana , ny tanjonao.
Aleo manirery toy izay mamela ireo olona tsy mandeha na aiza na aiza hisakana anao tsy ho anjaranao. - Joel Osteen
Manohy ny lohahevitry ny tanjona dia tokony ho tsapanao fa ny mitokana sy mahatsiaro ho manirery dia aleo manodidina anao amin'ny olona manakana ny fitomboanao.
Tsy midika akory izany fa hisakana anao ny olona rehetra, fa aza avela hofehezin'ny fahitana voafetra avy amin'ireo mpiara-dia aminao.
Mivavaha mba hamporisika anao hitady zavatra hivelomana, ny fahorianao irery, ampy hahafaty azy. - Dag Hammarskjold
Teny iray fanintelony momba ny fitadiavana tanjona amin'ny alàlan'ny fanirery mba hitondrana mody any an-trano ilay hafatra fa misy zavatra azo azo avy amin'ny fitokanana anao.
Manirery aho, nefa tsy ny olon-drehetra no hanao. Tsy haiko ny antony, misy olona mameno ny banga ary ny sasany manasongadina ny maha-irery ahy. - Anaïs Nin
Ity teny nalaina ity dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fifidianana izay avelanao hiditra amin'ny fiainanao. Ny olona sasany dia hanamaivana ny fahatsapanao ho manirery, fa ny hafa kosa hampaharatsy azy. Momba ny zavatra entin'ny olona iray amin'ny fiainanao izany.
Raha mianatra mipetraka amin'ny manirery ianao ary mandray azy io amin'ny fanomezana fa… fotoana hahafantarana anao, hianaranao fa matanjaka tokoa ianao, tsy hiankina amin'olon-kafa afa-tsy IZAO amin'ny fahasambaranao… dia ho tsapanao fa ny fanirery kely dia mandeha lavitra amin'ny famoronana IZAO manan-karena, lalindalina kokoa, mamelombelona sy miloko kokoa. - Mandy Hale
Ity no voalohany amin'ny teny nalaina efatra izay hijery ny maha-zava-dehibe ny fahalalana ny tenanao sy ny fitiavanao azy. Ny fanirery dia fitaratra izay ahitantsika mazava kokoa ny tenantsika mihoatra noho ny azontsika atao amin'ny miaraka amin'ny hafa.
tsy mahalala izay tianao hatao amin'ny fiainana
Ao anatin'ny fotony indrindra amin'ny fanirery rehetra dia faniriana lalina sy mahery ho an'ny firaisana amin'ny olona very. - Brendan Behan
Mahatsiaro ho manirery indrindra isika rehefa tsy fantatsika ny tenantsika satria, amin'ny fotony lalina indrindra, dia isika no olona tena te hifandray indrindra. Raha tsy afaka mifandray amin'ny tenantsika isika dia hahita fa sarotra ny mifandray amin'ny hafa.
Rehefa tsy zaka irery isika dia midika izany fa tsy manome lanja tsara ny namana tokana hananantsika isika hatramin'ny nahaterahantsika ka hatramin'ny fahafatesantsika - ny tenantsika. - Eda J. LeShan
Ny fanirery dia avy amin'ny tsy fahalalana ny lanjan-tenanao sy ny fanekena fa ampy ianao. Isika no olona handaniantsika ny andro manontolo Tiavo ny tenanao ary ny fitiavan'ny hafa no ho volombava amin'ny mofomamy fotsiny.
Tsy afaka manirery ianao raha tianao ilay olona miaraka aminao. - Wayne Dyer
Rehefa mankafy ny miaraka aminao ianao dia tsy afaka manenika ny fiainanao ny fanirery. Ianao dia afaka mifalia sy mianina tsy mila fiaraha-miasa ivelany.
Manampy hatsarana amin'ny fiainana ny fanirery. Mametraka fandoroana manokana amin'ny filentehan'ny masoandro izy io ary manome fofona rivotra madio kokoa amin'ny alina. - Henry Rollins
Misy zavatra momba ny maha irery mandritra ny fotoana sasantsasany izay mahatonga azy ireo ho tena manokana. Ny mitokana eo an-tampon'ny havoana iray, mijery ambany ny tany ambany dia tsy azo atao manokana miaraka amin'ny orinasa.
Raha irery ianao dia an'ny tenanao manontolo. Raha miaraka aminao na dia iray aza ny mpiara-miasa aminao, dia antsasaky ny tenanao ihany ianao na kely kokoa aza raha oharina amin'ny tsy fiheverana ny fitondran-tenany, ary raha manana namana mihoatra ny iray ianao, dia ho latsaka ao anatin'ny toe-javatra iray ihany. - Leonardo da Vinci
Rehefa irery ianao dia tsy mila manome ampahany amin'ny anao ho an'ny hafa. Amin'ny orinasa tsara dia azonao ny anjarany mitovy, fa rehefa tsy tsara ny orinasa dia avelanao hahantra kokoa. Amin'izany lafiny izany, ny maha irery dia manana tombony azo tsapain-tanana.
Misy fahafinaretana amin'ireo ala tsy misy lalana, misy fisandratana ao amoron-dranomasina manirery, misy ny fiarahamonina izay tsy misy manelingelina, ny ranomasina lalina, ary ny mozika ao anaty ny firohondrohony Tsy tiako loatra ny olona, ​​fa ny natiora kokoa. - Lord Byron
Ny fanirery dia manome anao fotoana bebe kokoa hifandraisana amin'ny natiora. Tsy variana amin'ireo olona miaraka aminao ianao ary afaka mandoka ny haren'ny hatsarana ary manontany tena manodidina anao. Manokana miaraka aminy ny vintana mitoera fotsiny amin'ny fotoana nomen'ny tontolo voajanahary.
Raha tsy mitovy ny iray dia voatery ho manirery. - Aldous Huxley
Miankina amin'ny toe-javatra nahatonga anao irery, mety ho irery ianao satria manana toetra tsy manam-paharoa ianao fa tsy takatry ny olon-kafa tsotra izao. Aza kivy amin'izany, jereo fa miabo. Tena tsy klone na ondry ianao fa mahavariana tokoa.
Arakaraka ny maha-matanjaka sy miorina amin'ny saina azy no vao mainka hirona amin'ny fivavahana mitokana. - Aldous Huxley
Fanamafisana bebe kokoa fa ireo izay voatahy amina tany am-boalohany dia mandray ny maha-olombelona na ireo izay mihevitra ny hafa amin'ny hafa dia mora manirery. Raha vao manaiky an'io ianao dia mety hahatsapa ho manirery.
Ny fahirano irery no ahitantsika ny tenantsika sy ny fahitantsika ny tenantsika, hitantsika ao amintsika irery ireo rahalahintsika mitokana. - Miguel de Unamuno
Ary farany, miverina amin'ilay hevitra isika fa ny fanirery dia voka-dratsy tsy azo ihodivirana amin'ny maha-olombelona. Isika rehetra dia mahatsapa ho manirery indraindray ary amin'ny alàlan'ny fahitantsika ny tenantsika no ahatsapantsika izany fifandraisana lalina misy eo amin'ny olona rehetra izany.
Manantena aho fa ireo teny nalaina irery ireo dia nahatonga anao hieritreritra momba ny manjo anao. Ny fanirery dia tsy misy tombony sy dikany. Raha ny marina dia afaka mampianatra antsika betsaka momba ny tenantsika sy momba ny fiainana izany.
Iza amin'ireo teny nindramina ireo no nanohina anao lalina indrindra? Mametraha hevitra etsy ambany hampahafantatra anay.
ny fomba hiatrehana ny fahadisoam-panantenana eo amin'ny fanambadiana
manambady fa manana fihetseham-po amin'ny vehivavy hafa
manomboka tsy tia ny namako akaiky indrindra